Farsamooyinka sameynta daruuraha | Saadaasha Shabakadda
Farsamooyinka sameynta daruuraha
A. Esteban | | Saadaasha hawada, Daruuro
Cumulonimbus: tusaale daruur xambaarsan
Samaynta daruuraha badankood waxay ka dhashaan dhaqdhaqaaqyada kor u kaca ee hawada qoyan ee ku sii fida sababo la xiriira hoos u dhaca cadaadiska sare oo sidaas darteed qaboojinta adiabatic. Markaa qayb uumiga biyaha ah ayaa isku urura si uu daruur u noqdo.
Markii hore waxaan sharxnay astaamaha noocyada kala duwan ee daruuraha iyo sidoo kale sida qaababkoodu u yihiin natiijada ka dhalata geeddi socodka hawada kor loogu qaadayo oo ah waxa qaabeeya. Noocyada kala duwan ee dhaqdhaqaaqa taagan taas oo sababi karta sameynta daruuro ayaa hoos ku taxan:
Qalalaasaha farsamada (ama jahwareerka qalalaasaha)
Isku-rogidda (ama qulqulatada kuleylka)
Joogitaan dheer iyo gaabis ah
La qalalaase farsamo ama isqabqabsi waxay ka dhalataa markii hawadu u dhawaato dhulka dushiisa oo ay kala daadato xoog isdifaaca taxanaha tifaftirka. Qalalaasahaas waxaa lagu jecel yahay joogitaanka caqabadaha (geedaha, dhismayaasha, buuraha, iwm).
Daadadka gaarsiinta waxay horumaraan marka hawadu kululaato agagaarka dusha sare. Ku gaarsiinta ama qulqulatooyinka kuleylka ayaa isku darsamaya qalalaase farsamo ama jahwareer si ay u keento isku-darka lakabyada hoose ee jawiga.
en el fuulitaanka hadalka waxa dhacaya ayaa ah in hawadu markay gaadho silsilad buuro ama buuro ah lagu qasbo inay kacdo labadaba lakabyada hoose iyo joogaba. Dhaqdhaqaaqa kor u kaca wuxuu saameeyaa lakabka qoto dheer ee jawiga iyo qeybin toosan ee heerkulka kujira ayaa wax laga badalay Hawada lagu qasbay inay kacdo waxaa lagu qaboojiyaa balaadhinta adiabatic oo daruuro ayaa samaysan kara.
El fuula fidin ballaadhan oo fidsanBadanaa waxaa markii hore kiciya kala duwanaanta qaybta sare ee 'troposphere'. Socodka kaladuwan ee joogga sare wuxuu keenaa hoos udhaca cadaadiska lakabyada hoose ee udhow dhulka dushiisa, sameynta niyad jab. Isku-imaatinku wuxuu markaa ka dhacayaa meel u dhow heerka badda oo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayaa u dhacaya dhumuc weyn oo ka mid ah dhulka loo yaqaan 'troposphere' ka dibna, haddii ay jirto huur ku filan, horumarinta daruuraha ballaaran ayaa dhacaya.
Xigasho - Isugeynta qoraalada tababarka ee fasalka IV shaqaalaha saadaasha hawada », waxaa qoray BJ Dib -u -qiimeyn
Macluumaad dheeraad ah - Cumulonimbus, Dhererka, joogga, cabirka toosan iyo heerarka daruuraha, Uumiga, qaboojinta iyo sublimation
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Farsamooyinka sameynta daruuraha